URAMAPHOSA UFUNA UMAGASHULE APHUME | Scrolla Izindaba
URAMAPHOSA UFUNA UMAGASHULE APHUME
UMengameli uCyril Ramaphosa ukhombisile ukuthi uNobhala-Jikelele we-ANC uAce Magashule kumele ehle esikhundleni ngenxa yamacala enkohlakalo abekwe wona.
URamaphosa ubekhuluma nekomidi eliphezulu kuzwelonke le-ANC.
Esitatimendeni esinegama elinamandla uthe i-ANC iya ngokuya ibukeka “njengenhlangano ezilwisa nayo uqobo”.
Izinhlaka zeqembu zizibeke zodwa empini yokuthi uMagashule – nabanye ababhekene necala lenkohlakalo – bayakhishwa yini ngesikhathi kuqulwa icala.
“Uqhekeko seluyabonakala futhi amaqembu ayavela futhi,” kusho uRamaphosa.
Engqungqutheleni yama-57 yaleli qembu kowezi-2017, i-ANC yanquma ukuthi abaholi ababhekene namacala obugebengu kumele bashiye izikhundla zabo baze basule amagama abo.
UMagashule noSihlalo wezaseKhaya ePhalamende uBongani Bongo benqabile ukushiya phansi yize bebhekene namacala enkohlakalo.
Ngakho-ke amaqembu abo afake imibono yezomthetho ngokuba semthethweni kwesinqumo sonyaka wezi-2017.
URamaphosa uthe kuyamangaza ukuthi kuzobizwa abameli ukuzophikisana nephuzu elisobala kangaka.
“Emibhalweni yale-NEC, sinikezwa imibono engekho ngaphansi kwemihlanu yezomthetho mayelana nokuqaliswa kwesinqumo sethu esibizwa ngokuthi‘ ‘isinqumo sokushiya eceleni’.
“Nginesiqiniseko sokuthi akekho phakathi kwethu obengasho ukuthi izingxoxo zesigungu esiphezulu kuzwelonke bezizofika kulokhu.
“Sike safuna le mibono yezomthetho futhi bangasisiza ekucaciseni ukungabinasiqiniseko kwabanye bethu.
“Kepha uma sizocabanga ngomlando oziqhenyayo nojabulisayo wenhlangano yethu yesikhathi esingaphezu kwekhulu – kubaholi abakhulu abayiqondisile ezikhathini ezinzima kakhulu nezinobungozi kunzima ukungayiboni le mibono emihlanu yezomthetho njengecala lenhlangano esesiyiyo.”
I-NEC ibihlangana nje ocingweni ingabonani, kanti kusasa wusuku lokugcina – okuyilapho kuzocaca khona ukuthi iqembu lihlela ukubhekana kanjani noMagashule.